रचनात्मक कमन्स इजाजतपत्रहरूको बारेमा एक साधारण सारांश क्रिएटिव अनलाइन
रचनात्मक कमन्स इजाजतपत्रहरूको बारेमा एक साधारण सारांश
जुडित मर्सिया | | सामान्य, धेरै
यद्यपि त्यहाँ धेरै छन् कानूनहरूले कामहरूको प्रतिलिपि अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ, यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ र अधिक यदि हामी नेटवर्कमा सन्दर्भ गर्दछौं। धेरै लेखकहरूले अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई केही कामहरू सर्तहरूमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यी सर्तहरू द्वारा सेट गरिएको छ रचनात्मक कमन्स इजाजत पत्रहरू. तिनीहरूले हामीलाई अनुमति दिन्छ र सामग्रीमा अधिकारहरू ग्यारेन्टी गर्दछ।
कूल छ छवटा विभिन्न प्रकारको क्रिएटिव कमन्स इजाजतपत्रहरू। यदि तपाई यस विषयको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने पढ्न रोक्नुहोस् किनकि हामी तपाईलाइ यस विषयको साधारण सारांश दिनेछौं। तपाईं लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईं लेखक हो जो उनीहरूको कार्यहरू साझा गर्न चाहन्छ, वा अर्को तर्फ, तपाईं एक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ जो सर्तहरूको सम्मान गर्दै अर्कोबाट सामग्री प्रयोग गर्न चाहन्छ।
1 क्रिएटिभ कमन्स भनेको के हो?
2 रचनात्मक कमन्स इजाजत पत्र "तह"
3 इजाजतपत्र को प्रकार
4 अधिक इजाजतपत्रहरू, सबैभन्दा प्रतिबन्धात्मक
क्रिएटिभ कमन्स भनेको के हो?
हामीले अघिल्लो पोष्टमा भनेझैं क्रिएटिभ कमन्स एक को बारे मा छ गैर नाफामुखी संगठन। यो क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित छ। लाई समर्पित छन् बिभिन्न टुक्राहरूको लेखकहरूको कार्यहरूको शोषणको सीमा ग्यारेन्टी गर्नुहोस् वा ईन्टरनेटमा सृष्टि। अर्कोतर्फ, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कानुनी रूपमा परियोजनाहरू वा अन्यको कार्यहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, जबसम्म लाइसेन्सको सम्मान गरिन्छ।
त्यहाँ फरक छन् लाइसेन्स को प्रकारहरु रचनात्मक कमन्स। को विभिन्न दृश्य प्रतीकहरू प्रत्येक इजाजतपत्रको साथ सम्बन्धित छ र, त्यसकारण, ती फरक-फरक अनुमतिहरू जुन तिनीहरू प्रत्येकले अनुमति दिन्छ। उनीहरूले हामीलाई के प्रस्ताव गर्छन् भनेर जान्न हामी तिनीहरूलाई तल हेर्नेछौं।
रचनात्मक कमन्स इजाजत पत्र "तह"
जब उनीहरूले उनीहरूलाई बोलाउँथे, इजाजत पत्रमा तीन "तह" हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले, हामी पहिलो लेर फेला पार्छौं जुन हामीले कुनै पनि लाइसेन्समा फेला पार्नेछौं: लेगा कोडl सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई कानुनी ज्ञान नभएकोले, दोस्रो लेयर "साझा डीड" वा "मानव पढ्नयोग्य"।
La इजाजतपत्रको अन्तिम तह सफ्टवेयरले मान्यता दिएको हो। यसले वेबलाई क्रिएटिभ कमन्स इजाजतपत्र अन्तर्गत कार्यहरू पत्ता लगाउन सजिलो पार्न काम गर्दछ। यस मामलामा अनुवाद हुनेछ "मेशिन पठनीय".
इजाजतपत्र को प्रकार
यी इजाजतपत्रहरूको एक अर्कासँग मिल्दो भिन्नै प्यारामिटरहरू छन्। हामी तिनीहरूलाई तल देख्छौं:
एट्रिब्युसन (BY): यस इजाजत पत्रले अरूलाई काम प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, जबसम्म मूल सिर्जनाको लेखकत्व स्वीकार गरिन्छ। यो वितरित हुन सक्छ, मिश्रित, अन्य उद्देश्यका बीच व्यावसायिक उद्देश्यको लागि प्रयोग। संक्षेप मा, काम प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर लेखक उद्धृत।
समान साझा गर्नुहोस् (BY-SA): यस इजाजतपत्र अन्तर्गत कामहरू प्रयोग गर्न लेखकलाई उद्धृत गर्नु आवश्यक छ र उनीहरूले नयाँ सर्तहरू समान शर्तहरू इजाजतपत्र दिन्छन्, तिनीहरू समान हुनुपर्दछ।
व्युत्पन्न काम बिना (BY-ND): यस अवस्थामा, काम प्रयोग गर्न सकिन्छ, कि, यसको पुन: वितरण, वाणिज्यिक वा होईन, जबसम्म यो परिमार्जन गरिएको छैन र यसको पूर्णतामा प्रसारित हुन्छ। र हो, लेखकलाई स्वीकार गर्दै।
गैर-वाणिज्यिक (BY-NC): यसले तपाईंलाई काम परिमार्जन गर्न र मूलबाट अर्को निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ, तर यसको उद्देश्य व्यावसायिक रूपमा छैन।
यी चार माथिका मुख्य हुन्, तर त्यहाँ अरू दुई थप छन् जुन म्याक्स जरुरतहरू छन्, जुन हामी तल वर्णन गर्नेछौं।
अधिक इजाजतपत्रहरू, सबैभन्दा प्रतिबन्धात्मक
अर्को, हामी दुई बाँकी इजाजतपत्रहरू उद्धृत गर्नेछौं, यी माथि उल्लेखित आवश्यकताहरू मिलाउँछन्। तिनीहरूलाई चिन्नुहोस्:
अव्यावसायिक - कुनै व्युत्पन्न कार्य छैन (BY-NC-ND): यो सबैको सबैभन्दा प्रतिबन्धित इजाजतपत्र हो। यसले मात्र हामीलाई काम डाउनलोड गर्न र साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ जबसम्म लेखक चिन्न सकिन्छ र परिमार्जन गरिएको छैन। साथै, यो व्यावसायिक उद्देश्यको लागि हुन सक्दैन।
अव्यावसायिक - कुनै व्युत्पन्न कार्य छैन (BY-NC-SA): यो इजाजत पत्रले हामीलाई मिक्स गर्न, समायोजित गर्न सक्दछ र मूल कामबाट सिर्जना गर्न सक्दछ जब यो व्यावसायिक उद्देश्यको लागि होईन। तपाईंले लेखकलाई स्वीकार्नुपर्दछ र नयाँ काममा उही इजाजतपत्र एट्रिब्यूट गर्नुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » रचनात्मक कमन्स इजाजतपत्रहरूको बारेमा एक साधारण सारांश
स्पेनिश मूर्तिकारले प्रख्यात रोमन सम्राटहरूलाई हाइपर-यथार्थवादी मूर्तिकारहरूमा पुन: निर्माण गर्दछ
आगामी आठौं र अन्तिम सत्रको लागि सबै अद्भुत गेम अफ थ्रोन्स पोस्टरहरू